Suuriya oo digniin u dirtay Maraykanka iyo Turkiga - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaSuuriya oo digniin u dirtay Maraykanka iyo Turkiga
Xukuumadda Suuriya ayaa ka dalbatay in ciidamada Suucdiga iyo kuwa Turkigu ay isaga baxaan dalkeeda, ayadoo ka digtay in haddii aan saas la yeelin ay qaadan doonto tallaabo xoogaggaas ka dhan ah.
Hadal uu wasiirka Arrimaha Dibadda ee Suuriya Waliid Mucallim ka jeediyey Golaha Guud ee Qaramada Mioobay ayuu ku tilmaamay in joogitaanka ciidamada “Maraykanka iyo kuwa Turkiga” ee dalkiisa ay yihiin kuwo sharci darro ah.
Wuxuu sidoo kale dhaliilay dadaallada ay wadaan xukuumada Ankara iyo Washington ee ku aaddan in goob dagaalka ka caaggan laga sameeyo gudaha dalka Suuriya. Asagoo sheegay in tallaabooyinkan ay yihiin kuwo ka hor imaanaya axdiga Qaramada Midoobay.
Suuriya ayaa waxaa ku sugan ku dhawaad kun askari oo Maraykan ah oo taageera Kurdiyiinta hubaysan ee dagaalka kula jira kooxda la baxday dawladda Islaamka.
Sidoo kale waxaa dalkaas gudaha u galay ciidamo Turki ah oo la dagaallamaya kooxo Islaamiyiin ah oo hubaysan iyo gooni u goosato Kurdi ah.
Turkiga ayaa doonaya in goobtaan dagaalka ka caaggan laga dhiso guryo ay ku noolaan karaan ugu yaraan hal malyan oo qaxooti reer Suuriya ah.
Maraykanka iyo Turkiga ayaa xuduudda dalkaas ka bilaabay tababarro wadaag ah, balse xukuumada Turkiga ayaa wali ka caraysan taageerada Washington ay siiso Kurdiyiinta.
Mucallim ayaa yiri: “lama aqbali doono wax heshiis ah oo ku saabsan in gudaha Suuriya laga sameeyo deegaan ammaan ah haddii xukuumadda Suuriya aanay oggolaan”.
Wuxuu intaas ku daray in ciidan kasta oo ajnabi ah oo dalkiisa ku sugan isla markaasna aan ayaga codsi waydiisan ay yihiin kuwo gumaysi doon ah waana in buu yiri ay dalka isaga baxaan si dhakhso ah.
Madaxweynaha Maraykanka, Donald Trump ayaa sannadkii hore sheegay in ciidamadiisu ay isaga baxayaan Suuriya, balse ay sii joogi doonaan dalkaas qaar ka mid ah ciidamadiisu si aysan halkaas ugu soo laaban kooxda la baxday dawladda Islaamka.